Sudio Vasa, ekweisi na oke na izu oke | Akụkọ akụrụngwa
Villamandos | | Ngwa, Nyocha
Fewbọchị ole na ole gara aga, ekpebiri m ịzụta, mgbe echere ọtụtụ echiche (emesịa ị ga-aghọta ihe kpatara ya), isi si n'aka ndị na-emepụta Sweden Okirikiri, nke n'ezie maka ọtụtụ ndị dị ka m ruo ụbọchị ole na ole gara aga amaghị ama. Ma ọ bụ na n'oge na-adịbeghị anya, a na-amalite ịmata ha na mba ụwa, enweghị m obi abụọ ọ bụla na ha ga-enweta ya site na ngwaọrụ ha rụpụtara, nke kachasị mma na njiri mara yana iji nlezianya mee ihe ruo oke.
Na m ikpe m nwee ike nwalee nlereanya nke Igwe okwu Sudio Vasa, nke na-eme ihe n'eziokwu mere ka ọ ju m anya. Site na mgbe ịmalitere imepe igbe ebe inatara ha, ị ghọtara na imefu ego buru ibu na ekweisi ndị a, mana na o ruru ya.
Ma ọ bụ ya enweghị ihe ọ bụla na-efu na ngwugwu Sudio Vasa, ihe nke kwesiri ibu ihe kwesiri ma na odi nma abughi ebe obu mgbe izuru ekweisi ihe kachasi nma bu ichota ekweisi. Sudio echewo na ekweisi ndị a ga-enwerịrị ike ibu ya gaa ebe ọzọ n'ihi nke ahụ, ọ na-etinye obere akpa akpụkpọ anụ. Na mgbakwunye, enwekwara pads zuru ezu nke nha dịgasị iche na ụdị ihe ndozi iji nwee ike ijikọ eriri igwe isi na jaket anyị ma ọ bụ uwe elu anyị.
Ihe nlere nke m na egosiputara gi taa di na acha anụnụ anụnụ na ọla edo, mana Site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị agba katalọgụ ịhọrọ si buru ibu. Ma ọ bụ na otu n'ime ihe ndị kacha mkpa nke ndị na-emepụta Swedish bụ na ekele maka Sudio Vasa a, anyị nwere ike ịnụ egwu ma ọ bụ ụdị ọdịnaya ndị ọzọ na ogo dị elu, kamakwa na ekweisi na-eme dị ka ihe mgbakwunye, na ọ bụ ejiji na "ele ọ dị mma ".
Dị ka ị pụrụ ịhụ na onyogho anyị na-egosi gị n'okpuru, ekweisi ndị a sitere na Sudio enweghị ihe ọ bụla ha tinyekwara njikwa egwu ọkpụkpọ, na-enwe ike ịkwaga n'etiti egwu dịka ọmụmaatụ ma ọ bụ bulie ma wedata olu. Na mgbakwunye, ọ ga-ekwe omume ịza oku maka igwe okwu etinyere. Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ otu nnukwu nhọrọ nke ekweisi ndị a, nke na mgbakwunye na ịnwe nlezianya anya, ma na-enye anyị atụmatụ zuru oke, na-enye anyị ohere ịmara mgbe niile ihe na-eme na ama anyị.
1 Ọnụahịa na nnweta
Dị ka anyị gwara gị na mbụ ọnụahịa nke Sudio Vasa a bụ euro 70, ọnụahịa na-enweghị mgbagha agbago maka ekweisi, ma site ugbu a gaa n’ihu, ana m agwa gị, mgbe ahụ ka m ga-eji echiche nke aka m mezue ya, na ọ bara ezigbo uru itinye ego a na ekweisi ndị a nke ga-abụ ndị anyị na-enweghị ike ịhapụ.
Iji nweta ngwaọrụ Sudio a, anyị nwere ike ime ya site na weebụsaịtị ya ebe anyị nwekwara ike ịzụta ụdị ndị ọzọ na-eme ka ọ dị mma ọbụna ndị nke anyị nyochara omimi taa.
Na mgbakwunye na maka ịbụ ndị na-agụ Actualidad Gadgdet ị nwere ike zụta ha na ego pụrụ iche nke 15% na-eji koodu ahụ ugbu 15 na i kwesiri itinye ya mgbe a jụrụ gị.
Ekwesịrị m ikwupụta na enwebeghị m otu n'ime ndị ahụ mefuru nnukwu ego na ekweisi, mana oge a na ike gwụrụ m ịzụrụ ndị ọhụrụ kwa ọnwa ole na ole, ekpebiri m itinye nnukwu ego. Ruo ugbu a ego kachasị elu m mefuru na ụdị ụdị a bụ euro 20 na mgbe ịzụrụ Sudio Vasa ndị a, abịara m nkwubi okwu na m na-efu ego ọtụtụ afọ.
Emefuola m okpukpu anọ karịa ego ekweisi m na-azụbu n’oge na-adịghị anya, mana ugbu a enwere m mmetụta na a na-anụ ihe niile n’ụzọ dị iche na ekweisi ndị a nke Sudio na-eme ga-anọ m ogologo oge. , n'ihi na a na-ahụta àgwà ha ozugbo ị jidere ha n'aka gị.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-emefu obere ego na ekweisi, enwere m ike ịkpọ gị ka ị nọrọ obere ego na ngwa ngwa, ozigbo ị nwere igbe dị n'aka ị ga-achọpụta ọdịiche dị na mma. Mgbe ịmalite iso ha gere egwu, ị ga-ekwenyeworị ma ọ bụrụ na ịchọtala ekweisi dị ọnụ ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Sudio Vasa, ekweisi na oke na izu oke
Phew mgbe ị na-ekwu na ị nwetụbeghị nnukwu ego na ekweisi, enwere m ike ịghọta otuto na-asọ oyi.
Agaghị m achọfu € 200 na ntị, (nke sitere na ahụmịhe m na-agwa gị na ọ na-akwụ ụgwọ), mana maka otu ọnụahịa ahụ ị nwere ike ịchọta ụdị dị elu!
Site na nkwanye ùgwù zuru oke, ọ ga-amasị m ịnweta ntakịrị ozi gbasara njirimara ọrụ ya na ụdị ụda, (ọ bụrụ na bass na-ebu ụzọ, ma ọ bụ na nke ahụ, na-enwu gbaa ...)
Ka o sina dị, daalụ maka nyocha !!
Audeze na nke ikpeazu. Ma n'ime na na bụ 900 euro ruo 5000 euro. Maka m enweghị ekweisi ka mma ma ọ bụ Martin logan.
9 onyinye zuru oke inye nne gi na “ubochi ndi nne”